Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii xubnaha Jaaliyadda Norway oo Lagu Qaatay Go’aamo Dhaxal-gal ah
Shirkii xubnaha Jaaliyadda Norway oo Lagu Qaatay Go’aamo Dhaxal-gal ah
Posted by ONA Admin	/ November 25, 2012
Oslo- Waxaa caawa fiidkii caasimaddaOslo ee dalkaNorway, lagu soo gaba-gabeeyey shirkii xubnaha Jaaliyadda S. Ogadenia oo bishiiba hal mar la qabto. Shirkan oo ay goob joog ahaayeen maamulka Jaaliyadda, xubnaha iyo madax ka tirsan Jabhadda ONLF ayaa lagu qaatay go’aamo dhaxal gal ah.
Kulanka Jaaliyadda oo lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah ayaa waxaa akhriyey Sheekh Abdiwali, oo xubnaha kula dardaarmay inay Ilaahay ka baqaan dadkooda la gumeysigu haysto ku dadaalaan siday ugu hiilin lahaayeen.
Intaas kadib, waxaa hadalka qabsaday Gudoomiyaha JaaliyaddaNorway, Mudane Abdirahman Sh. Yusuf, oo kulanka ka akhriyey qodobadda shirka looga hadlayey. Gudoomiyaha ayaa soo bandhigay wax qabadkii Jaaliyadda ee labadii bilood ee tagay, kuwaasoo loo fuliyey sidii loo qorsheeyey. Gudoomiyaha ayaa aad ugu dheeraaday baahida loo qabo in gargaar iyo taakulo lala gaadho shacabka ay soo barakiciyeen gumeysatada Woyaanaha oo falal ka baxsan bini’aadnimada ka geysanaya dhulka Ogadenia.
Sidoo kale, waxaa khadka telefoonka kulanka xubnaha kaga soo qeyb galay isaga oo jooga magaaladda Nairobi ee dalka Kenya, Mudane Abdulaahi (Xaliye), oo shirka la wadaagay war bixinadii ugu dambeeyey ee kasoo yeedhay gudaha Ogadenia.
Mudane Xaliyey ayaa sheegay in Jabhadda ONLF gaadhay guul siyaadadeed, mid milatari iyo mid diplomaasiyadeed, taas oo ka dhalay buu yidhi, kadib markii shacabka Ogadenia taageero buuxda la garab istaagay halganka xaqa ah ee Ogadenia ka socda.
” Dhaqankeenu waakan ugu gobanimada badan, uguna Islaamsan, sababtaasna weeyaan mida aan u difaacayno sharafteena iyo sumcadeena… Waana difaaci doonaa waligeed”, ayuu yidhi Mudane Xaliye oo intaas raacshay, in gumeysiga Woyaanuhu ku fashilmay qorshe walba oo uu is lahaa halagu curyaamiyo halganka..
Intaas kadib, waxa kulanka lagu soo dhaweeyey Hogaanka Arimaha Ururka ee Jabhadda ONLF, Mudane Mohamed Yusuf, oo bogaadiyey dadaalka joogtada ah ee xubanaha Jaaliyadu ugu jiraan siday uga midho dhalin lahaayeen himilooyinka shacabka Ogadenia oo u baahan in qadiyadeena la gaadhsiiyo golayaasha caalamka. Mudane Mohamed Yusuf, ayaa ku nuux-nuuxsaday burburka ka jira gudaha taliska Woyaanah oo maraya meel aad u xun oo aan ka soo noqosho lahayn, midaas oo buu yiri laga garan karo is dhexyaaca ka jira dhan walba oo aad ka fiiriso taliska Woyaanaha.
Waxaan cambaareynaynaa annaga oo ah xubnaha, maamulka, wax-garadka, culimaa’udiinka, siyaasiyiinta iyo dhamaan Shacabka Soomaalida Ogadenia ee ku dhaqanka dalka Norway, bahdilka iyo gumeynta foosha xun ee taliska Woyaanuhu kula kacay odayaasha dhaqanka Ogadenia ee aan waxba galabsan ee wakiilka gumeysiga Abdi iley uu muddada dhawrka maalmood ah ku hortaagnaa magaaladda Jigjiga si uu ugu raali galiyo taliska Woyaanaha ee xooga ku haysta dalka Ogadenia.
Waxaan sidoo kale, cambaareyn taa lamid ah dusha uga tuuraynaa ragga caloshood u shaqeystayaasha ah ee uu hor kacayo iimaan laawe Ina Aadan Dhagoole, oo cimrigan u xuub siibtay inuu macaash karaadiyo dhiiga shacabka dulman ee Ogadenia, oo maalin iyo habeen lagu hayo xasuuq iyo tirtirid lamid ah kii Naziga oo kale. Shirka ayaa cambaareeyey dadkii soo alifay riwaayaddan oo ay kamid ahaayeen hadhaagii ururuka Ajjo gudhay damiir laawe Ibraahim dheere, Abdi Ubbo iyo kafiilkooda General Abraha Wolde.
Kulanku wuxuu digniin u dirayaa shirqoolada gumeysigu u maleegayo odayaasha dhaqanka Ogadenia, ee ka qeyb galay shirkii Abdi Ubbo, isaga oo damacsan inuu laayo marka ay ku laabtaan deegaanadoodii, danta uu ka leeyahayna ay tahay si uu udhaho waxaa loo laayey fikirkoodii iyo bahdilaadii ay kaga sheekeeyeen shirkii Abdi Ubbo.
As/c bulshada somalida Ogadenia Salaan kadib waxaan leehay guushu way dhawdahaye hala isu dheeli tiro naf iyo maalba halganka oo hala laba jibaaro dadaalka iyo kor uqaadista hawlaha halganka